Blue Diamond dia finday slots izay mametraka ny tsoraka marika eo ny teny hoe "Tsotra". Ity-tserasera slot tsy ampy amin'ny maro slot ambony toerana ary mivelatra ny Red Tiger Gaming. Izany koa dia tonga noho ny tokan-tena, ary ny Wild payline Respin tombony endri-javatra. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ity lahatsary tsotra slot avy ny famerenana ny lalao eto ambany.
Tsotra ny lalao Misy amin'ny Maro Top slot Site
Misy tena maro slot toerana ambony izay manolotra ny Blue Diamond aterineto slot milina ho an'ny mpilalao milalao. Izany slot tonga miaraka 3 reels, ary araka ny voalaza etsy ambony iray monja payline. Manana sekoly tranainy Vibe izany slot sy ny reels, ary koa ny paytable, manana rafitra metaly mamirapiratra milaza ny amin'ny sisin-taniny.
Ao amin'io slot, misy feo mahazatra tranainy vokatry ny hanangana ny haavon'ny fialam-boly rehefa milalao. Eo amin'ny reels, manana marika fa maro mpilalao ny biriky sy ny feta slots ary koa ny Retro nahaleo lahatsary slots dia ho ampiasaina. Anisan'izany ny mena 7s, cherries, mpitovo, avo roa heny sy telo hidy. Ka vao iray na roa fotsiny amin'ny serizy mariky ny hany payline, ianao dia hahazo ny payout. Ianao koa hahazo payout ka vao ny telo amin'ireto fisotroana fanehoana an'ohatra.
Wild no nasolo ny hafa Symbols Ho Fandresena
Ny Blue Diamond Wild famantarana no hisolo ny hafa sary masina eo amin'ny reels ity slots finday rehefa tany izy amin'ny reels. Ny fanaovana izany dia hampitombo ny vintana ny mpilalao nahazo remby nanampy mandresy tsikombakomba. Ny marika Wild koa mitana toerana lehibe eo amin'ny endri-javatra io tombony lahatsary slot milina telo reels.
Play Wild Blue Diamond Respins amin'ny Top slot Site
Ho an'ireo slot toerana ambony fanatitra Blue Diamond-tserasera Casino slot. Afaka mahazo milalao toy ny boriki-tombony Respin endri-javatra. Mety ho sarotra ny mahatakatra ny fomba iray 3 miraingiraingy azon'ny, 1 payline Video slot manam-tombony endri-javatra, atomboka amin'ny. tsara, ny Blue Diamond Wild famantarana dia hijanona mangatsiaka eo amin'ny payline Rehefa tany izy eo aminy sy ny vokatr'izany, dia mahazo maimaim-poana iray kofehy ireny.
Isaky ny iray hafa indray Wild marika tany izy amin'ny payline, dia mijanona koa ny toerana malalaka eo amin'ny kofehy ireny maimaim-poana hafa nomena. Ny marika Wild fahatelo tafatontona teo amin'ny ny payline dia hitondra any amin'ny mpilalao fitadiavam-bola jackpot payout mitovy ny hetsiky ny 888x ny vola nofatorany teo amin'ny tsatokazo.
Izany dia tsotra slot lahatsary hita ao amin'ny toerana slot ambony maro izay tonga amin'ny fototra sary, sarimiaina sy ny feo vokatry. Ny endri-javatra tombony Respins Wild afaka manome fandresena goavana ny hetsiky ny 888x ary izany an-tserasera slot tonga miaraka amin'ny RTP ny 96.17%.